Semalt Expert Anofanotaura Nezveramangwana rekutsvaga kwewebhu
Kugadzirwa kwewebhu ndeye nzira yakawanda yekuunganidza deta kubva mumatare. Kutaura kuti zvakakoshesa ndezvekunyanya kunetseka. Icho chinongonyanya kukosha - bankruptcy laws ma. Ruzivo simba, uye sangano ripi zvaro risina kukwana, saka web scraping ndiro ropa iro marudzi ose emabhizimusi epanzvimbo ari kumhanya.
Zvingava NGO, sangano rinogadzira purogiramu, kutanga, shanduro yemabhizimisi, kana kunyange kambani ye Fortune 500, inonyatsotanga kuunganidza mashoko. Saka, kukosha kwekutsvaga kwewebhu hakugone kudarika-kusimbiswa.
Mukukwikwidzana munyika yekushamwaridzana haimbove yakanyanya kukunda kupfuura ikozvino. Vatambi vari mumakambani akasiyana-siyana ikozvino vanoshandisa zvombo zvose zvavanogona kuti vakwikwidzane. Munguva ichangopfuura, masangano akatanga kushandiswa kwekutsvaga webhupu sechimbo chekurwisana nevakwikwidzi vavo. Pashure pezvose, kana iwe une ruzivo rwakakosha kupfuura vadzivisi vako, iwe uchava nehuwandu pamusoro pavo. Zivo, vanoti, simba. Kunyange zvazvo webhupu yekushambadzira inozadza ine mhinduro dzakawanda, dzinogona kuiswa muzvikamu zvitatu chete, uye ndezvi:
Kuvaka iwe pachako kudhonza kwekushandiswa kwekushanda kana software iwe pachako kana kuti nokubhadhara mapurogiramu
Kuenda kune wechitatu-web web scraping services
Kutenga mazita ezvinyorwa zvekutsvaga
Zvose zvitatu izvi zvinobatsira uye zvisingabatsiri. Kunze kwezvo, iyo yakakosha yekugadzirisa sangano yekambani chero ipi inogona kuvimba nehutano hwekutsvaga webhusi yebhizimisi.
Kufanana nedzimwe nzira dzekombiyuta, kubvisa webhusi kuchaenderera mberi nekuvandudza. Saka, ino nyaya inotarisa pamusoro remangwana rekutsvaga webhu. Usati waenda mberi, zvinokosha kuti ujekese kuti maonero anotsanangurwa munyaya ino nezvemangwana yekutsvaga webhutori inongoratidzira uye inofungidzira. Kuisa izvozvo mupfungwa, tarira, remangwana re webhupu yekusanganiswa inotariswa kubva kune maonero akasiyana.
Kubva kuuchenjeri hwemafungiro
Sezvo njere dzekugadzirira dziri kushandiswa mumativi ese ehupenyu, zvinofungidzirwa kuti teknolojia ichashandiswa zvakanyanya nokuda kwekutsvaga webhu munguva inotevera. Mune mamwe mazwi, mabhobhoti ane njere kana mashizha achagadzirwa kuti atarise uye nyora deta nguva dzose kumakambani akasiyana.
Zvechokwadi, mabhobhoti atoshandiswa kushandiswa kwewebhu, asi hapana kana mumwe wavo anogona kugadzirisa kuchinja kukuru kune dzimwe nzvimbo dzisina kubatsirwa nevanhu. Somuenzaniso, kana urongwa hwekutsvaga nzvimbo huchichinja, huripo hutsotsi hwekutsvaga webhu huchakwanise kuparadzanisa nzvimbo yacho pasina mushandisi kugadzirisa zviduku zvishoma. Izvi hazvizove dambudziko remangwana rerobhodhi rakanyanya kuchenjera yewebhu kubva kumabhoti sezvo vachakwanisa kushandisa mazano avo kuti vatarise chero kuchinjwa pane zvezvinangwa zvayo panguva yekutsvaga web nekunyorera kana kusina mubatsiri wevanhu. Vachakurumidza kusikwa kana vasina kutogadzirwa.
Kubva kuGoogle yekona
Chikuru web scraper iGoogle nokuti bhizimusi rayo guru nderokukwezva nekutsvaga mawebhusayithi uye rinokambaira mawebsite uye zvose zvavanobatana nazvo. Izvo zvinotevera kutiGoogle inogona kutanga kupa webtrack services. Uye kana ikadaro, ichange iri huru uye yakanakisisa yekambani yekutsvaga webhu kubvira iko yave ichikuvadza webhu. Vatengi vachatoda chete kutarisa URL dzekutsvaga mapeji ewebhu, uye vachagamuchira zvose zvavanoda kubva kuGoogle. Mushure mezvose, zvinyorwa zvewebsite yose zvatove pane zvinyorwa zvayo yerondedzero.
Chimwe chikonzero cheGoogle kutanga kutora web web scraping services ndechekuti inoda zvishoma kana kuti kwete zvimwe kuedza kuuraya pamwe nayo. Iko kambani inopfurikidza ne kuchera mawebhusayithi kakato. Kuva nedhizinodikanwa iri muruoko nguva yose ichaita kutiGoogle ipe webhuruti yekutsvaga nguva yekudzoka iyo vamwe vapeji vese vese vasingazombokwanisi kufanana.
Sezvo Google ichakwanisa kugovera basa risina mamwe maitiro, inogona kupawo makwikwi emitengo iyo hapana imwe sangano inogona kufanana. Kungofanana nekambani iyo ikambotora mutengesi yemichina yekutsvaga, Google inogona kutora hutachiona hwekutsvaga webhuwo zvakare. Izvo zvinowanzoitika zvakanaka.
Kubva kuongororwa uye sangano maonero
Pasinei nokuti zvinodhura sei, shangu hazvibatsiri kumunhu asina makumbo. Saka, dhesi dzingave dzisingashandisi zvakanyanya kune sangano rine unyanzvi hwekuongorora hutsva. Ichokwadi, dhizwi pacharo harisi inokosha, ndiyo nzira yaunogona kushandisa nayo. Saka, sezvo makambani ari kuramba achiwedzera kushandiswa kwebasa ravo rekutsvaga, vanozotangawo kubvisa zvimwe zvigadziro mukubhadhara vaongorori vezvizere vane ruzivo kana kudzidzisa vashandi vavo musangano re data, uye kuongorora kwedhidzo.
Zvichienderana nemashoko akafanana, mamwe masangano achaita zviri nani kuishandisa kupfuura vamwe. Izvi zvinongova nokuti vane vanhu vane unyanzvi hwekutsvakurudza data. Saka, remangwana rekutsvaga webhu richaita kuti zvive nehuwandu hwekuda kwekusungirirwa kwedata uye kuongorora.
Kubva mune zvekuchengeteka
Mazhinji emashandisi ekutsvaga yewebhu akange asingachagoni kushanda sezvo mamwe masangano acharamba achiwedzera kuedza kuita kuti mawebsite ave asingakwanisi kupera. Panguva iyoyo, mapoka emakambani ari kushandisa sangano rechitatu rekutsvaga webhuta kana kuti avo vakashandisa zvigadzirwa zvakanakisisa zvichange vachikwanisa kunyora data kubva kune mamwe mawebsite.
Mukupedzisa, zvinokosha kuti masangano atange kuzviisa kune ramangwana rekutsvaga webhu. Mamwe matanho anodikanwa aungada kufunga ndeaya:
1. Iwe unotanga kushanda pakukudziridza mawebhobho ako ekungwara anoenderera mberi anozobata data kukwidza inoda zvinobudirira NOW.
2. Iwe unofanirwawo kusimbisa kuedza kuita kuti nzvimbo yako ive yakaoma zvikuru kupora. Zvakadini kana vamwe vavakwikwidzi vako vane nyore kuwana zvinyorwa zviri pawebsite yako asi iwe haugone kuparidzira ivo? Yeuka, ruzivo rune ruzivo rwaunayo pamusoro pevakwikwidzi vako, rinowedzera mikana yako yekuvakunda.
3. Iwe unofanirwawo kutanga kushanda zvakanyanyisa mukuvandudza sangano rako rekutsvaga uye unyanzvi hwokuongorora. Izvi zvinogonawo kufananidzwa nemamiriro ezvinhu ehondo. Dzimwe nguva, iwe unogona kugumburwa pamashoko akachengetwa evanokukwikwidza kana vanopikisa. Mashoko aya haazomboshandisi kana iwe usingakwanisi kuuronga nokukurumidza sezvinobvira. Nyanzvi dzakawanda dzinowanikwa nedzimwe nyanzvi dzinowanzoona mamwe maitiro mumatare akabatanidzwa nyore nyore kuitira kuti iwe ungada kukoka vamwe vavo.
Nenguva yakajeka, kukwanisa kugadzirira sangano rako nokuda kwemashoko makuru uye remangwana rekubudiswa kwewebhu kuchaita basa rakakosha mukubudirira kwenguva refu kwebhizimisi rako.